Lullabies ee carruurta
Muusikada barashada iyo feejignaanta
Waxay u egtahay kuwa garashada leh
Lullabies ee dhallaanka
Gaar ahaan daawadayaasheenna ugu da’da yar, waxaan u diyaarinnay ururinta cajiibka ah ee heesaha hurdada. Lullabies-ka carruurta ayaa sidoo kale ah soo jeedin loogu talagalay waalidiinta doonaya inay la kulmaan nasasho yar si ay waqti ugu helaan qaxwada loo-ooman yahay oo ay u helaan xoog ay ku helaan nolol-maalmeedka. Adaa mudan…
Muusiggeennu waa ururinta codad aad u qurux badan iyo laxan hoosaad leh oo ku geyn doona dhulka aamusnaanta, nabadda iyo nasashada. Waxaan duubnaa muusikada loogu talagalay nasashada iyo wada noolaanshaha gudaha. Waad ku mahadsan tahay waad degi kartaa, si fudud ayaad u degi kartaa oo naftaada u heli kartaa daqiiqad.
“BUUQ CADE” maxay tahay oo run ahaantii ma shaqaysaa? Wax ka fudud ma jiraan, tag liiskayaga Ciyaarta oo arag naftaada sida ugu dhakhsaha badan ee ilmahaagu ama aad u seexan doonto. Buuqayaga Cad waa dhawaaqyo si gaar ah loo soo xulay oo hurdo ka dhigi doona waligood si sahlan
Dhawaaqyo dabacsan oo taageera nasashada, nasashada iyo nabadda. Jawi shucuur leh
Waxay u egtahay inay kaa caawineyso inaad seexato. Hurdo caafimaad leh oo degdeg ah
Muusig qadiimi ah oo deggan oo ku habboon nasashada iyo nasashada. Ku fiican hurdada
Muusikada wax lagu barto
Muusikada fududeynaysa xoojinta, diiradda iyo barashada
Qaylo cad. Waa maxay ?, faa’iidooyinka iyo xeerarka isticmaalka. Dhawaaqa cad ayaa ah dhacdo ay dad badani u haystaan inay tahay dhacdo aan la garanayn
Muusiga nasashada – noocyada, goorta la dhegeysanayo, maxay na siinaysaa? Qaar badan oo naga mid ah, dhageysiga muusikada nasashada ayaa ah hab aad u wanaagsan
Muusiga in la barto – maxaa la dooranayaa? Waxbarashadu waxay caqabad dhab ah ku tahay dad badan – way adagtahay in diirada la saaro oo
Sanduuqyada muusikadda, nashaadaadka carruurta
Lullaby aad waxtar u leh si ay carruurta seexiso
Lullaby ee dhallaanka
Lullaby qurux badan oo ku habboon dhallaanka ka hor wakhtiga jiifka
Sanduuqa muusiga ee carruurta
Waad ku mahadsan tahay sanduuqan muusiga, ilmahaagu wuxuu ku seexan doonaa 5 daqiiqo gudahood
Lullaby caadi ah oo deggan si ilmaha loo seexiyo.
Muusikada barashada iyo hurdada
Kani waa hab fantastik ah oo lagu dardargeliyo kartida waxbarasho ee madxafkayaga. Codadkaan gaarka ah ayaa sahli doona xifdinta iyo kartida waxbarashada. Dib u fadhiiso, is deji oo u oggolow in jirkaagu si farxad leh u degganaado oo aadan sugi doonin natiijooyinka waqti dheer.
Focus iyo diiradda
Kuwani waa dhawaaqyo gaar ah oo leh awood weyn oo tamar si loo xoojiyo feejignaanta iyo diiradda, aad bay muhiim u tahay marka la baranayo. Waxaan soo jeedineynaa in lagu dhageysto jawi saaxiibtinimo oo ka fog dhawaaqyada nolol maalmeedka.
Muusikada iyo dhawaaqyada dabeecadda
Muusigga oo ay weheliyaan dhawaaqyada dabeecadda ayaa ah hab aad wax ku ool u ah oo lagu nasto iyo nabadda gudaha. Laxanada si gaar ah loo sameeyay oo lagu daray quruxda dhawaaqyada dabeecadda ayaa kaa dhigi doonta inaad si dhakhso ah u hesho nabad gudaha ah.
Muusiga waxbarashada iyo feejignaanta
Muusiga loogu talagalay sytres iyo blues
Muusiga duugista iyo HBS
Dhawaaqyada jilicsan waxay bixiyaan nasasho
Muusiga nasashada ee waxbarashada
Waxaan ku talinaynaa
Muusig dabacsan oo xasilloon, muusigga barashada, ka -fiirsashada iyo feejignaanta, lullabies -ka carruurta, BUUG CAD oo qalajiyaha timaha, dhawaaqa badda, badda iyo dabaysha. Muusikada loogu talagalay